China Sharpened achara unyi na-asa ezé ụlọ ọrụ na-emepụta | Enyuan
A na-akpọ ahịhịa achara achara mgbe mgbakwunye mgbakwunye achara na bristles ya. Agba dị iche na ezé ezé. Ebe ọ bụ na a na-agbakwunye bristles na unyi achara C na-arụsi ọrụ ike nke sitere na unyi achara, agba bụ oji okike. Enweela ihe banyere teknụzụ a. Ejiri dị ka ahịhịa ezé iji gbochie ume na nsogbu ndị ọzọ.
aha ngwaahịa achara unyi asacha ezé
Bristle ihe ngwo unyi filament
Ahịhịa aka ihe pp + tpr
Ahịhịa nkọwa ajị anụ dị nro
Ahịhịa ahịhịa 0.18mm
ebe mbido jiangsu, China
.Dị okenye ahịhịa
0.18mm Slender kwuru ntutu
Isi ahịhịa ahọpụtara nke ọma, nwere obere filaments, na-eme ka ọdịiche dị n'etiti ezé, nwee oghere a pụrụ iche, na-eweta ahụmịhe ọhụrụ nke nhicha ezé.
Achara unyi unyi
A na-edozi unyi achara dị elu n'ime ntụ ntụ dị mma, nke nwere ikike adsorption siri ike ma nwee ike ịmịpụta ihe nri na isi. Nwere ike ime ka ahịhịa dị ngwa ngwa, debe ọcha, nchekwa na ịdị ọcha
Agba dị iche na ezé ezé. N'ihi na agbakwunye bristles na achara unyi C ndị na-arụ ọrụ sitere na unyi achara, agba bụ oji okike, nke dị iche ma jupụta na mmadụ.
Achara unyi C ion ndị na-arụsi ọrụ ike bụ ọmarịcha ike-akara C na usoro ntanetị sitere na achara unyi n'okpuru oke okpomọkụ na nrụgide dị elu, ma jiri teknụzụ teknụzụ iji jikọta achara unyi C ion ion na bristles iji mepụta nnukwu adsorption, mmiri iguzogide, iru mmiri akara na Antibacterial ike, ọ nwekwara ike hapụ nnọọ infrared ụzarị na-adịghị mma oxygen ion. A maara ya dị ka onye nlekọta ahụike nke 21st narị afọ. A na-eji ya n'ọtụtụ ebe na ndụ ndị mmadụ kwa ụbọchị.
The n'elu dayameta nke bristles bụ 0.18mm, 8, nke nwere ike juputara ọcha nke gingival crevicular na eze nkwonkwo nke na-enweghị ike inweta nkịtị ezé, jiri nwayọ wepụ eze mgbako na eze akara, melite ike ihicha nke ezé ezé, belata omume omume ọnụego nke periodontitis, ma emebila enamel ezé ezé, iji kpuchido ahụike na ịdị ọcha nke ezé.
Usoro ịsa ikikere ezé bụkwa usoro iji nwayọ na-atacha chịngọm ahụ n’elu obere ahịhịa. E jiri ya na brọsh ịsa ezé nkịtị, ahịhịa ezé achara nwere ike belata nrụgide na gingiva ma belata ihe omume nke ịcha ọbara ọbara na ọzịza.
Nke gara aga: oem soft bristles obere ahịhịa isi nha eze
Osote: Unyi gburugburu ezé ezé antibacterial ezinụlọ
Achara Unyi Antibacterial Nha nha
Achara Nha nha Antibacterial
Unyi gburugburu ezé ezé antibacterial ezinụlọ
Elu àgwà ezinụlọ nano asacha ezé maka ụlọ